ကျွန်တော်၊ သူမနှင့် ဧပရယ်လ် မိုးတိမ်များ
“ချစ်တယ် ချစ်တယ်” ဟု ကျွန်တော် မကြားအောင် သူမ ပြောသည်။
သို့သော် … ကျွန်တော် ကြားလိုက်ပါသည်။
အသံမထွက်စေဘဲ နှုတ်ခမ်းလှုပ်ရုံမျှ ပြောခြင်းဖြစ်သဖြင့် “နားနှင့်ဆတ်ဆတ်ကြားသည်” ဟု မပြောနိုင် သော်လည်း “ရင်နှင့်ဆတ်ဆတ်” ကြားပါသည်။
ကျွန်တော့် ချစ်ရသူလေးသည် မည်မျှ ရယ်စရာကောင်းလိုက်ပါသလဲ …
ကျွန်တော့်အနားကပ်၍ ကျွန်တော် မကြားအောင် “ချစ်တယ်” ဟု ပြောသည်တဲ့။
နောက်ပြီး … ထိုသို့ ပြောသောနေရာကလည်း တော်တော်ကို ကဗျာမဆန်လှသော နေရာတစ်ခု ဖြစ်နေပြန်သည်။ ထားပါ … အရေးမကြီးလှသော ကိစ္စဖြစ်ပါသည်။
အရေးကြီးသည်က ကျွန်တော့် စိတ်ကိစ္စဖြစ်သည်။
သူမ၏ ဝန်ခံစကားကို ကြားကြားချင်း ကျွန်တော့် စိတ်ခံစားမှုမှာ ရောင်စုံဖြစ်နေသည်။
ပထမ ဇဝေဇဝါ …. ထို့နောက် ကျွန်တော် ပျော်ရွှင်သွားသည်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကို သူမ နောက်ပြောင်မှု တစ်ခုလားဟု တွေးမိသည်။
ကျွန်တော့်ကို အတည်ပြောနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သေချာသွားတော့ ပျော်လာပြန်သည်။
သို့သော် … ကျွန်တော့်ကို ပြောဖူးသော သူမ၏ စကားအချို့ကို ပြန်တွေးမိတော့ “တကယ်ဟုတ်ပါ့မလား” ဟု တွေးမိကာ ထိတ်လန့်လာပါသည်။
ကျွန်တော့်ကို သူမ တည်တည်ကြည်ကြည် မျက်ဝန်းအစုံဖြင့် စိုက်ကြည့်ကာ ပြောခဲ့ဖူးပါသည်။
“သူမသည် တော်ရုံတန်ရုံဖြင့် ယောင်္ကျားလေး တစ်ဦးကို သတိရမနေတတ်သော စိတ်မာသူဖြစ်သည်”
“သူမ ရွေးချယ်သူသည် သူမ၏ ဘဝလက်တွဲဖော် အဖြစ်ပါ တည်ရှိနိုင်သည့် အရည်အချင်းမျိုး ရှိရမည်”
“သူမ ချစ်မိသောသူသည် သူမ အရှုံးပေးဖို့ ထိုက်တန်သောသူ ဖြစ်ရမည်”
ကျွန်တော့်ကို ထိုသို့ ပြောခဲ့ဖူး၏။ သိပ်မကြာသေးသော အချိန်အတောအတွင်းကပင် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုစကားများနှင့် ထိုအချိန်အကွာအဝေးများကို ပြန်စဉ်းစားမိသောအခါ တကယ်ပင် ကျွန်တော် တုန်လှုပ် ထိတ်လန့်ရပါသည်။
မနေ့တစ်နေ့ကအထိ ကျွန်တော့်ကို မတွေ့ရလျှင် တမ်းတသတိရနေခြင်း မရှိသေးပါဟူသော သူမသည် ကျွန်တော့်ကို တကယ်ပင် … လိုအပ်နေတတ်ပြီလား ….
ကျွန်တော်သည် သူမ၏ ဘဝလက်တွဲဖော် ဖြစ်နိုင်သည့် အရည်အချင်းမျိုး ရှိ၊ မရှိ သူမ အကဲခတ်နိုင်ခဲ့ပြီလား …
ကျွန်တော်က သူမကို အရာရာအတွက် အရှုံးပေးရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေခဲ့သော်လည်း သူမ တကယ်ချစ်၍ အရှုံးပေးရန် ထိုက်တန်သူသည် ကျွန်တော်ပင်ဖြစ်သည်ဟု သူမ သတ်မှတ်လိုက်ပြီလား …
သူမအား ဘာကိုမှ မစဉ်းစားဘဲ ကျွန်တော် ချစ်မြတ်နိုးခဲ့မိပါသည်။
ထို့ကြောင့်ပင် … ကျွန်တော် ခိုင်လုံစွာ သက်သေမပြနိုင်သော အရာကိစ္စများအကြောင်း တွေး၍ ရင်မောစွာ ထိတ်လန့်ရပါသည်။
“ချစ်တဲ့သူက အရှုံးပဲ ….”
အစဉ်အဆက် လူသားတို့ ပြောခဲ့သလို သူမကလည်း ထိုသို့ခံယူထားသည်။
မှန်ပါသည် … သို့သော် ကျွန်တော့် အတွက်တော့ ထိုစကားက မပြည့်စုံပါ …. ချစ်သောသူသည် ရှုံးပါသည်။
ထို့အပြင် မမြင်ရသော ထူးခြားဆန်းကြယ် ဖြစ်ရပ်များကို ကြောက်သလို တွေး၍ … တွေး၍လည်း ကြောက်ပါသည်။
ထိုကြောက်ရွံ့မှုကို ကျွန်တော်က “အာကာသကြောက်စိတ်” ဟု နာမည်တပ်ပါသည်။
ရှင်းပြပါမည် … အဆုံးစွန်အထိ မမြင်နိုင်စွမ်းသော ဂြိုလ်များ၊ ကြယ်စင်စုများ၊ နက္ခတ်တာရာများ၊ စကြဝဠာများ အကြောင်း လိုအပ်သည်ထက် ပိုမိုတွေးတော စဉ်းစားမိသည့်အခါ အမည်မဖော်တတ်သော လှိုက်ဖိုထူးဆန်းစိတ်မျိုးဖြင့် ကျွန်တော် ကြောက်ရွံ့တတ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ကြည့်ခဲ့ဖူးသည့် ပုဂံပြားပျံနှင့် ဂြိုဟ်သားများ အကြောင်း ရိုက်ကူး ထားသော ဇာတ်လမ်းများသည်လည်း “အာကာသကြောက်စိတ်” ကို မသိစိတ်က ပြန်လည်တွန်းကန် အခြေခံခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော်ယူဆပါသည်။
ကျွန်တော် သူမနှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာအချို့ကို ထိုကြောက်ရွံ့စိတ်မျိုးနှင့် ကြောက်ရွံ့ပါသည်။
သူမကို ချစ်သွားမိချိန်တွင် ကျွန်တော့်ကို ပြန်မချစ်မှာ ကြောက်သည်။
ကျွန်တော် မဟုတ်သော အခြားတစ်ယောက်နှင့် တွဲ၍မြင်ရမှာ ကြောက်သည်။
ကျွန်တော် သူမကို ဘယ်လောက်အထိ တန်ဖိုးထား၍ ချစ်သလဲဆိုတာကို သူမ မသိမှာ ကြောက်သည်။
ကျွန်တော့်ကို ငြင်းပယ်လိုက်မှာ ကြောက်သည်။
သူမ ကျွန်တော့်ကို ပြန်ချစ်လာချိန် … ကျွန်တော့်အချစ်ကို လက်ခံလိုက်ချိန်တွင်ရော ကျွန်တော့် အကြောက်တရားများ သေဆုံးသွားခဲ့ပါသလား ….
ဟင့်အင်း … မဟုတ်ပါ … ကျွန်တော် ငြင်းဆိုပါမည်။
ပထမကြောက်စိတ်ထက် ပို၍များပြားသော ထုထည်ပမာဏဖြင့်ပင် ကြောက်ပါသည်။
ကျွန်တော့်ကိုပြောသည့် “ချစ်တယ်” ဟူသော စကားသည် သူမ၏ စိတ်ကစားမှုတစ်ခုဖြစ်မှာ ကြောက်သည်။ ကျွန်တော့်အပေါ် သူမ တဖြည်းဖြည်း ငြီးငွေ့သွားမှာကြောက်သည်။
သူမ ကျွန်တော့်ကို ဘယ်လောက်အထိ ချစ်သလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်မသိရမှာ ကြောက်သည်။
အနည်းဆုံးတော့ …. ကျွန်တော့်ကို သူမ သဝန်မတိုမှာကို ကျွန်တော် ကြောက်ပါသည်။
ထိုသို့ဖြင့်ပင် … ကျွန်တော် သူမကို ချစ်ပါသည်။
ထို့အတူ သူမနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော စိတ်ခံစားမှု အတော်များများကိုလည်း ကြောက်ပါသည်။
ထိုစကားအရဆိုလျှင် ကျွန်တော်သည် ခဏခဏ သေဆုံးပစ်လိုက်ရန် ထိုက်တန်သူတစ်ဦးပင် ဖြစ်နေပြီ ထင်၏။
ထိုသို့ဖြင့်ပင် … ကျွန်တော်သည် ချစ်ခြင်း၊ ကြောက်ခြင်း၊ ရှုံးခြင်း၊ သေဆုံးမှုနှင့် သူမတို့ အကြားတွင် သွားလာ လှည့်ပတ်နေသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ချစ်ကြခြင်း ဆိုသည်မှာ ထိုသူနှစ်ဦး၏ အရေပြားချင်း ထိတွေ့ကိုင်တွယ်ကြရုံသက်သက် ကိစ္စဟု တွေးတော ပြောဆိုသူများကို ကျွန်တော် ရွံရှာပါသည်။
သို့သော် …. သူမ၏ ပြောင်ချော်ချော် အမူအယာကို မြင်ရချိန်များတွင် … ၊ သူမကို အသည်းယားမိသော အချိန်များတွင် …. ၊ သူမကို ငေးမောကြည့်ရင်း ချစ်မြတ်နိုးမှုများ ပေါ်လာချိန်တွင် … ထိုအခါတွင်တော့ သူမ၏ ဦးခေါင်းမှ ဆံပင်စလေးမျးကို ကျွန်တော် ပွတ်သပ်မိတတ်ပါသည်။ ဒါက ကျွန်တော့် စိတ်ကိစ္စဖြစ်သလို ခြွင်းချက်လည်း ဖြစ်ပါသည်။
သူမသည် ကျွန်တော့် စိတ်ခံစားမှုနှင့် ခံယူချက်တို့ကိုပါ ဇောက်ထိုးမိုးမျှော် ဖြစ်သွားအောင် လုပ်ပစ်နိုင်စွမ်း ရှိသူဖြစ်၏။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် ဂရုစိုက်ရမှာ ပျင်းသော ကျွန်တော်သည် သူမကိုတော့ အရိပ်တကြည့်ကြည့်နှင့် ဂရုတစိုက် ရှိနေတတ်ခဲ့သည်။
မိမိကိုယ်ကို ပွင့်လင်းသူဟု သတ်မှတ်ထားသော ကျွန်တော်သည် သူမ မသိအောင် ကြိမ်ဖန်များစွာ သူမ ရှိရာသို့ သွား၍ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ကြည့်ဖူးပါသည်။
သူမ စိတ်ညစ်နေသည့်အခါ ကျွန်တော်ပါ ရောယောင်၍ တိတ်ဆိတ်သွားမိတတ်သလို သူမ ပျော်ရွှင်သည့်အခါ ကျွန်တော်ပါ အလိုလို ပြုံးရယ်နေမိလျက်သားဖြစ်သည်။
ယုတ်စွအဆုံး … ကျွန်တော် လေးလေးနက်နက် ရေးထားသော ကဗျာ၊ စာစုများကိုဖတ်၍ သူမ လှောင်ပြောင် ရယ်မောနေလျှင်တောင် ကျွန်တော် နာကျင်ရခြင်းမျိုး မရှိပါ။ သူမ ကျေနပ်မည်ဆိုလျှင် ကျွန်တော့် အနုပညာကို သူမ၏ ရယ်မောပျော်ရွှင်မှုနှင့် လဲလှယ်ပေးလိုက်ပါမည်။ ကျွန်တော် အလွန်ချစ်သော အနုပညာထက်ပင် ပို၍ သူမကို ကျွန်တော် ချစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်က အနည်းငယ်တော့ အတ္တကြီးသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။
“နင့်ကို ငါ့ထက်ပျော်အောင် ထားနိုင်မယ့်သူကို နင်ရွေးချယ်သွားမယ် ဆိုရင်လည်း ငါကျေနပ်ပါတယ်” ဟု ပြောတတ်သူ အချို့ကို ကျွန်တော် အထင်သေးသည်။
အဲဒါ တကယ့် စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံစိတ် မဟုတ်ဟု ကျွန်တော်ထင်သည်။
အဲဒါ ရသေ့စိတ်ဖြေအတွေးဖြစ်သည် … ခပ်သိုးသိုး အတွေးအခေါ်သာ ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်သာဆိုလျှင် … “နင့်ကို သူတို့ ပျော်အောင် ထားနိုင်တာထက် ငါက ပိုပျော်အောင် ထားနိုင်ပါတယ်” ဟုပင် ပြောမည်မှာ သေချာသည်။
သူမဝတ်ဆင်ထားသော အဝတ်များကိုကြည့်၍ ရင်ခုန်ရှုမောနေရခြင်းထက် ကျွန်တော်ကတော့ သူမဝတ်ဆင်မည့် အဝတ်တန်ဆာသာ ဖြစ်လိုက်ချင်ပါသည်။ ကျွန်တော်က တဆိတ်တော့ အတ္တကြီးပါသည်။
ကျွန်တော့် ခံယူမျက်အရ၊ ကျွန်တော့် အသက်အရွယ်အရ တခြားဘာကိုမှ ထည့်မစဉ်းစားဘဲ အချစ်အကြောင်းကို ရူးရူးမိုက်မိုက် တွေးတောနေရန် မသင့်ကြောင့် ကျွန်တော်သိပါသည်။
သို့သော် သူမကို မလွန်ဆန်နိုင်စွာ … ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် မလွန်ဆန်နိုင်စွာပင် သူမကို မျက်လုံးစုံမှိတ်၍ ချစ်ခဲ့ပါသည်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ သူမအပေါ် ကျွန်တော် မငြီးငွေ့သွားစေရန် သူမ ဆန္ဒရှိသကဲ့သို့ ထပ်တူညီမျှစွာပင် ကျွန်တော်လည်း ဆန္ဒရှိပါသည်။
တကယ်တော့ အထက်မှာ ကျွန်တော် ရှည်ရှည်လျားလျား ရေးသားခဲ့မှုများသည် ကျွန်တော့်တွင် ထိုသို့ရေးခွင့် ရှိပြီဟု မဏ္ဍပ်တိုင် တက်ပြလို၍သာ ဖြစ်ပါသည်။ နောင်တွင် မည်သို့ဖြစ်ဖြစ် …. ယခုလောလောဆယ်တွင်တော့ ကျွန်တော် သူမကို “ချစ်တယ်” ဟု ပြောခဲ့သလို သူမလည်း ကျွန်တော့်ကို “ချစ်တယ်” ဟု ပြောခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်နှင့် သူမသည် ချစ်သူရည်းစားဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်နှင့် သူမသည် ချစ်သူများ ဖြစ်ကြသည်။
မည်သူမှ ထပ်မပေးသော်လည်း နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်တော့ ထပ်ပြောချင်ပါသေးသည်။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသည် ချစ်သူများ ဖြစ်ပါသည်။
ဧပရယ်လ် ၃၀ ရက် ၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်
မျက်ဝန်းတစ္ဆေ ... ညနေ
တစ်ခါက . . . . မျက်ဝန်းများထဲတွင် . . . . သနားကြင်နာမှုများ တပ်ဆင်၍ . . . ကျနော် မြတ်မြတ်နိုးနိုး ချစ်ပါသည်။ သရော်ရယ်မြူးရိပ်ကို နှုတ်ခမ်းလွှာများတွင် မထင်ဟပ်စေဘဲ အကြည့်ဖြင့် အစားထိုးခြင်းကိုလည်း . . . . မျက်ဝန်းများ ပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်လှ၏။
ဆန်းပြားလှိုက်ဖို . . . ရင်ထဲမှာလည်း ကပိုကရိုနဲ့ . . . မကုန်ဆုံးနိုင်အောင် ကျယ်ပြန့်များပြားလိုက်တာ . . . ဘယ်တော့မှ မကုန်ခမ်းနိုင်တော့တဲ့ ကန့်သတ်မှုမျိုး . . . နောက်ပြီး ထူးဆန်းတဲ့ အာကာသကြောက်ရွံ့စိတ်မျိုးလည်းပါဝင် . . . ကိုယ်တိုင် . . . ကြယ်ပွင့်လေးတွေ ဖြစ်နေတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် မော့ငေးမျှော်ရီ နေရတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် . . . အဲဒီ နှစ်မျိုးလုံးရဲ့ ကြားထဲက လွတ်လပ်ပွင့်လင်းနေတဲ့ လေထုအလွှာလား . . .
လရောင်အလင်းလေ . . . ဝင်းဖြာစီးပျိုနေလိုက်ပုံ . . . မှိုင်းညို့ပြာလွင်မှုဟာ ကိုယ့်အသွေးအသားထဲအနှံ့။
အချိန်အခါမဟုတ်ဘဲ . . . ပန်းတို့ပွင့်လာ . . . မုန်တိုင်းဟာ ပွင့်ဖတ်ပွင့်ချပ်တွေလို . . . ကျိန်စာသင့်တာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ကိုယ့်ညီမလေးဆီ . . . သူ့မျက်ဝန်းတွေထဲ . . . ဘယ်လို နတ်ဆိုးစစ်သည်တို့ ချင်းနင်းကြပြီလဲ . . . .
ခေါင်းမှာ . . . ငရဲပန်းမကိုဋ် ဆင်ယင်လို့ . . . မျက်ဝန်းတွေ . . . မျက်ဝန်းတွေမှာ . . . တစ်လွှာပြီးတစ်လွှာ . . . ရီဝေရူးသွပ်စွာ . . . အို . . . လှလိုက်တာ . . . လှလိုက်တာ ညီမလေးရယ် . . . . ကိုယ့်နှလုံးသွေးနဲ့မှ ခြေဆေးချင်တဲ့ စိမ်းစိမ်းရိုင်းရိုင်း အကြည့်မျိုးတွေနဲ့ ညီမလေးဟာ . . . ရက်ရက်စက်စက်လှနေလိုက်တာ . . . .
ကိုယ်သိမ်းထားလိုက်မယ် . . . ဆိုတော့မှ . . . ပွင့်ဖတ်ပွင့်ချပ်တွေဟာ . . . မုန်တိုင်းဖြစ်လာ . . . နတ်ဘီလူးခြေသံဖြစ်လာ . . . အိုး . . . . .
ကိုယ့်ရင်တည့်တည့် . . . လက်သန်းကလေးနဲ့ . . . ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ လက်သန်းလေးနဲ့ . . . မျက်ဝန်းမီးလျှံတွေနဲ့ . . ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်းအပေါ် မိုးပြိုပြီထင်ရဲ့ . . . မှောင် နေ လိုက် တာ . . . မိုးကြိုးလျှပ်ပန်းတွေ ဝန်းဝင်းဝုန်းဝုန်းနဲ့ . . . မွန်း . . . ကြပ် . . . ခြောက် . . . သွေ့ . . . ညီမလေး . . . မေ့ပြီ . . .
. . . . . . . . . . . ( ၇ )
ညနေသည် ထိုအိပ်မက်နိမိတ် ဖြစ်လာမည်ဆိုလျှင် . . . ဟင့်အင်း . . . ကျနော် မတွေးချင်ပါ . . . ကျနော် ရှင်သန်ရမည် . . . မဖြစ်ဖြစ်သည့်နည်းနှင့် . . . .
ကျနော်ချစ်သော လက်သန်းလေးသည် . . . အခြားလက်သန်းအား . . . လှမ်းချိတ်တွယ်၍ . . . ကျနော်ချစ်သော မျက်ဝန်းသည် . . . . အခြားမျက်ဝန်းတွင် ပျော်ဝင်၍ . . . ကျနော် . . . . ဘယ်နေရာ ရောက်နေခဲ့သည်လဲ . . . . ဘယ်အချိန်ဖြစ်နေသလဲ . . . . ‘ကျနော်ချစ်တဲ့သူက သူ့ချစ်သူလောက် ဘယ်သူ့မှ မချစ်ဘူး’
ခြေပစ်လက်ပစ် ထိုင်ချမိသည် . . . ကျနော့်မျက်လုံးများကို မြေမြှုပ်ပစ်လိုက်သည် . . . . ကျနော့်ကိုယ်ကျနော် . . စိတ်က ရောက်ချင်ရာရောက်ခဲ့သော်လည်း . . . ကျနော် . . . မျက်ဝန်းနှင့် မျက်ဝန်း၏ တစ်စုံတစ်ဦးနောက်သို့ . . နာမ်စိတ်မဲ့စွာ . . . လိုက်ပါ . . . . သွား . . . .
ကျနော် . . . မျက်ဝန်းအနား . . . တရွေ့ရွေ့ . . . တိုးကပ် . . . ကျနော့်ကိုရည်ရွယ်သော . . . ‘………….’ . . . . တီးတိုးစကား . . . .
မျက်ဝန်းပြောဖူးသော စကားအချို့ . . . . မျက်ဝန်း အရှုံးပေးချင်သောသူသည် ကျနော်မဟုတ်သော်လည်း ကျနော်ကတော့ မျက်ဝန်းကိုပင် အရှုံးပေးချင်ပါသည်။
တ စုံ တစ် ခု
` တ စုံ တစ် ခု ´
မဟုတ်ဘူး အဲဒါ .. …. ဒဏ်ရာရနေတဲ့ ကျားသစ်တစ်ကောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်
ကျုပ်အလှည့်ကျမှ . …..
… ……. …. …… မင်းဘာလဲ …. ငါဘာလဲ
ဒါဆိုရင် `ဘာလဲ´ကရော … … ဘာလဲ
ဆိုတော့ကာ .. …. မဟုတ်ပြန်ဘူး
တစ်ခုခုရှိတယ် .. ပြီး … တစ်ခုခုဖြစ်တယ်
အင်အားသက်ရောက်မှု တချို့တစ်ဝက်အလယ်မှာ ဟူး .. ….. ပြီးမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ် …
ဒီမှာကြည့် .. ….
. … …… …. ………. …… …… ……….. …
မဟုတ်ဘူး …. သေချာ ပြန်ကြည့်
မသေချာဘူး .. ….. ပြန်ကြည့်
.. …………. …………… ……..
.. ……. ..
မဟုတ်ဘူး … ကျုပ်လည်း မသိဘူး
သေချာတာတော့ အသေအချာ …
`တ စုံ တစ် ခု ဖြစ် လိမ့် မယ်´ ။
ဧပရယ်လ် ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်
Foot Note - အထက်ပါ Abstract Paint တစ်ခုဖြစ်သော Something အားကြည့်ရှုခံစား/ ရေးသား
အထက်ပါပုံကို noisyastronomer.com မှ ကူးယူဖော်ပြ
လွပ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ .. … မေး၍ ဖြေပါသည်
“လွပ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ .. … မေး၍ ဖြေပါသည်”
နည်းနည်းတော့ကြာခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်နဲ့ ရိုးရာတို့ အပြန်အလှန် စကားစမြည် ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ အင်တာဗျူးလို့ပဲ ဆိုကြပါစို့။ သူမေးတာတွေကို ကျွန်တော့်ရဲ့ အသိဥာဏ် လင်းပွင့်မှုရှိသလောက် ကျွန်တော် ဖြေကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ သာမာန်မေးရိုးမေးစဉ် မေးခွန်းမျိုးတွေ မဟုတ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော့် အဖြေတွေကလည်း ဖြေရိုးဖြေစဉ် မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့မေးခွန်းတွေက ကျွန်တော့်ကို မေးနေတာဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်းကို ရည်ရွယ်တဲ့ မေးခွန်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ လောကဓမ္မ ယေဘုယျဆန်တဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေ ဖြစ်လို့ ကျွန်တော်တင် မဟုတ်ဘဲ .. … အခု ဒီအင်တာဗျူးကို ဖတ်နေကြသူတွေပါ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ရှိတဲ့အဖြေကို ဖြေဆိုသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီပိုစ့်လေးဟာ အနည်းငယ် ကြာပြီဖြစ်ပြီး အဲဒီတုန်းက ချက်ခြင်းမတင်ဖြစ်ခဲ့ဘဲ အခုမှ File အဟောင်းတွေ ရှင်းရင်းနဲ့ ပြန်တွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး။ မေး ။ ကောင်းကင်ကို သွန်ချလို့ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်ရေတွင်းမှာ လသာစေချင်သလဲ။
ဖြေ ။ ကောင်းကင်က ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ ရေတွင်းထဲမှာ သာစေချင်တဲ့လက ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
ကျနော့်စိတ်ထဲမှာကတော့ “ကောင်းကင်” ကိုသွန်ချရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တင် ခြောက်ခြားမှိုင်း
ညှို့နေခဲ့ပါပြီ။ “လမင်း” ကို ဘယ်နေရာထားရမလဲလို့ တွေးပူရဦးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော် ရူးသွပ်ကိုက်ခဲမှုကိုပဲ လက်ခံရတော့မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကျနော်သေဆုံးတဲ့တိုင် ခွန်အားရှိ သလောက်တော့ ကောင်းကင်ကို မြေပြင်ဆီ သွန်ချခွင့် ပြုလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူး။
ကျနော် ရှင် သန် နေ သ ရွေ့ ပေါ့ .. …….
မေး ။ ဆုတ်ဖြဲပစ်လိုက်တဲ့ရက်စွဲတွေထဲမှာ ဘယ်ရာသီကို ပြာချထည့်လိုက်သလဲ။
ဖြေ ။ ငြင်းခွင့်ရှိရင် ငြင်းပါရစေ။
ကျနော့်ရဲ့ ရက်စွဲတွေက ဆုတ်ဖြဲခံခဲ့ရတာ .. …… ဘယ်ရာသီကိုမှ ပြာမချပါဘူး။ ကဗျာဆရာတစ်ဦးရဲ့ နှလုံးသားက မမာကျောနိုင်ခဲ့ဘူး။ ပြာချခံခဲ့ရတာပါ။ တစ်ခုတော့ရှိတယ် ၊ ကျနော် . . . မိုး ရာ သီ ကို မုန်း တယ်။
မေး ။ မှားသည်/ မှန်သည် လေချွန်နေလိုက်ပါ ဘယ်သီချင်းကိုဆိုမလဲ။
ဖြေ ။ ဒီနေရာမှာတော့ ကျနော်က ခင်ဗျားမေးခွန်းထက်ပိုပြီး ပြတ်သားမာကျောသူတစ်ဦးဖြစ်နေပါတယ်။ မှားတယ်ဖြစ်ဖြစ် မှန်တယ်ဖြစ်ဖြစ် ပေါ့လေ .. …
ကျနော်ကတော့ လေချွန်ရုံမက ရင်ကော့ပြီးပါ လမ်းလျှောက်ပြလိုက်မိမှာပါ။
ဒီတော့ မှားသည်/ မှန်သည် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော့်တုန့်ပြန်မှုက တစ်မျိုးတည်းပါ။ ကြည်ကြည်လင်လင်ပြုံးရင်း “ဟုတ်ကဲ့ ဒီအတွက် ကျေးဇူးပါ” လို့. . . မေး ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ခေါင်းစဉ်ပြန်တပ်ရင်. . . ဖြေ ။ ဘယ်တုန်းကမှ ဒီလိုမစဉ်းစားမိပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ခေါင်းစဉ်ပြန်တပ်ရလောက်အောင် မိုက်မဲတဲ့လူတစ်ယောက် မဖြစ်ချင်တာအမှန်ပါ။ (အထူးသဖြင့်) အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်ပေါ့။ အနုပညာသမားဟာ မျက်နှာများတယ် ၊ အတွေးအမြင်ကို ဖြန့်ကျက်ထားနိုင်တယ်။
အနုပညာသမားရဲ့ ဈာန်ဝင်စားမှုနောက်ကို ကိုယ့်ကိုကိုယ်တပ်တဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေက မှီအောင် လိုက်နိုင်မယ် မထင်ဘူး။
မေး ။ မိုးခါးရေတစ်ခွက် ဖျော်ပေးထားရင်. . . ဖြေ ။ ခပ်ရှင်းရှင်းပဲ။ “လုံးဝ” မသောက်ဘူး။ သောက်ရမယ်ဆိုလည်း တစ်ခွက်ဆိုတာ နည်းလွန်းတယ်။
မေး ။ မာရ်နတ်မင်းနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခွင့်ရခဲ့ရင် ဘာပြောချင်ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ဟင့်အင်း . . . အလေးပဲပြုလိုက်မယ်။ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရရင် ကျနော်သေရချည်ရဲ့ဗျာ။
သူ့မှာက လက်ရုံးပေါင်းတစ်ထောင်ရှိတာဗျ။ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးလို့ သူပြန်နှိပ်ပေးရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့ဗျာ :D
မေး ။ ရသအမြောက်ဆုံးပုံပြင်တစ်ပုဒ်အတွက် နှုတ်ခမ်းတွေ အဖွင့်အပိတ်လုပ်ခဲ့ဖူးပါလား။
ဖြေ ။ အရမ်းဝှက်ထားတော့ မနည်းစဉ်းစားရတယ်။
“ချစ်တယ်. . .ချစ်တယ်. . .ချစ်တယ်” သူ့ကို ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပြောပြသလို စိတ်ရှည်လက်ရှည်လည်း ပြောပြဖူးပါတယ်။ ကြေကွဲဖို့ကောင်းတာက သူပြန်ပြောခဲ့တဲ့ ပုံပြင်တွေကိုလည်း နားထောင်ပေးခဲ့ရတာပါပဲ။ မေး ။ သာဓကတွေသာ အမြဲမှားသွားကြမယ်ဆိုရင် လက်နှစ်ဘက်ကို ဖြန့်ချထားဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါသလား။
ဖြေ ။ မရှိပါဘူး ........ ဒါဟာ လူ့ဘဝရဲ့ မှားယွင်းမှုပေါင်းများစွာထဲက မှားယွင်းမှုတစ်ခုပဲ ဖြစ်တယ်။
မှားယွင်းခဲ့ကြတိုင်းသာ လက်လျှော့ကြကြေးဆိုရင် .. ….. ကျနော်တို့လက်တွေ ချည့်နဲ့နေခဲ့တာ ကြာပြီဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
ဧပရယ်လ် ၁၀ ရက် ၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်